Google, HTC, OnePlus တို့ထက်ရောင်းအားပိုကောင်းခဲ့တဲ့ Nokia Android ဖုန်းများ – DigitalTimes.com.mm
427 Shares 827 Views
Nokia က နည်းပညာပိုင်းအရတော့ ဖုန်းတွေထပ်ထုတ်မှာမဟုတ်ပေမယ့် Nokia-brand နဲ့ ဟန်းဆက်တွေကိုတော့ HMD Global ကနေ ဆက်ထုတ်နေပါတယ်။ အခုဆို Google, HTC နဲ့ OnePlus တို့ရဲ့ရောင်းအားထက်ကို Nokia ဖုန်းတွေရဲ့ရောင်းအားက သာသွားပါပြီ။
HMD ရဲ့ Nokia-brand နဲ့ဖုန်းတွေက HTC, Sony, Google, Lenovo, OnePlus နဲ့ တခြားဖုန်းတွေထက်ကို ပိုရောင်းရပြီးတော့ ၂၀၁၇ နောက်ဆုံး၃လအတွင်းမှာတင်ကို Nokia brand နဲ့ဖုန်းပေါင်း ၄.၄သန်းရောင်းခဲ့ရပါတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ထက် စမတ်ဖုန်းလောကကို ပြန်လည်ခြေချစပဲရှိသေးလို့ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ အောက်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရှယ်ယာမှာတော့ HMD ရဲ့ဖုန်းတွေက နံပါတ် ၁၁ နေရာကိုရောက်နေပြီးတော့ Huawei, Samsung တို့ Apple တို့ကိုလိုက်နိုင်ဖို့ တော်တော်လိုပါသေးတယ်။
အခုလည်း HMD ကနေ နောက်လ ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပမယ့် Mobile World Congress ပွဲမှာမိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ အဲ့ပွဲမှာ Nokia 3310 ကိုပြန်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ဗားရှင်းနဲ့ဖုန်းတွေ မိတ်မဆက်ဖို့မျှော်လင့်မိသလို Nokia brand အသည်းစွဲတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုလည်း HMD က ယူဆောင်လာခဲ့မယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် ဘာတွေမိတ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာသိရဖို့ MWC ပွဲကိုစောင့်မျှော်လိုက်ရအောင်….
Nokia က နညျးပညာပိုငျးအရတော့ ဖုနျးတှထေပျထုတျမှာမဟုတျပမေယျ့ Nokia-brand နဲ့ ဟနျးဆကျတှကေိုတော့ HMD Global ကနေ ဆကျထုတျနပေါတယျ။ အခုဆို Google, HTC နဲ့ OnePlus တို့ရဲ့ရောငျးအားထကျကို Nokia ဖုနျးတှရေဲ့ရောငျးအားက သာသှားပါပွီ။
HMD ရဲ့ Nokia-brand နဲ့ဖုနျးတှကေ HTC, Sony, Google, Lenovo, OnePlus နဲ့ တခွားဖုနျးတှထေကျကို ပိုရောငျးရပွီးတော့ ၂၀၁၇ နောကျဆုံး၃လအတှငျးမှာတငျကို Nokia brand နဲ့ဖုနျးပေါငျး ၄.၄သနျးရောငျးခဲ့ရပါတယျ။
ပွိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ထကျ စမတျဖုနျးလောကကို ပွနျလညျခွခေစြပဲရှိသေးလို့ စမတျဖုနျးဈေးကှကျမှာတော့ အောကျမှာပဲရှိနပေါသေးတယျ။ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျရှယျယာမှာတော့ HMD ရဲ့ဖုနျးတှကေ နံပါတျ ၁၁ နရောကိုရောကျနပွေီးတော့ Huawei, Samsung တို့ Apple တို့ကိုလိုကျနိုငျဖို့ တျောတျောလိုပါသေးတယျ။
အခုလညျး HMD ကနေ နောကျလ ဘာစီလိုနာမှာကငျြးပမယျ့ Mobile World Congress ပှဲမှာမိတျဆကျပှဲတဈခုလုပျဖို့စီစဉျနပေါတယျ။ အဲ့ပှဲမှာ Nokia 3310 ကိုပွနျဆနျးသဈထားတဲ့ဗားရှငျးနဲ့ဖုနျးတှေ မိတျမဆကျဖို့မြှျောလငျ့မိသလို Nokia brand အသညျးစှဲတှအေတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာတှကေိုလညျး HMD က ယူဆောငျလာခဲ့မယျလို့ ကွညောထားတဲ့အတှကျ ဘာတှမေိတျဆကျသှားမလဲဆိုတာသိရဖို့ MWC ပှဲကိုစောငျ့မြှျောလိုကျရအောငျ….
In-display fingerprint sensor နဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Android iPhone X clone